Ihe omimi: Web Scraping Database. Ihe Ntucha na Uru Uru Ọ na-enye maka azụmahịa
Nchapu HTML bụ ngwá ọrụ nke na-ewepu ibe weebụ weebụ n'ụzọ dị mfe. Anyị maara na ihe ka ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ buru ibu na-eji HTML. Ọ pụtara na ibe ọ bụla anyị nwere ike ịhụ bụ akwụkwọ ahaziri. Site n'iji mpempe akwụkwọ HTML, anyị nwere ike ịnweta data site na ibe weebụ dị iche iche wee gbanwee ya dị ka ngwugwu a na-agbanwe agbanwe na nghazi dị ka CSV na JSON. Ọ dị mma ikwu na ihe ntanetịcha HTML bụ otu n'ime ihe ndị kasị baa uru ma dị ịtụnanya scraping web na ihe nchịkọta data n 'ụgbụ. Enweela ike ịba uru ya.
1. Na-azọpụta oge anyị
Site na nchịkọta HTML, ị nwere ike iwepụ ozi site na ebe nrụọrụ weebụ dị ike. Ịkwesighi ihe ọ bụla ọzọ iji mee ihe na HTML dịka nke a bụ usoro ihe niile na-eme iji wepu data nwere ike ịkọ na nke bara uru. N'adịghị ka nchịkọta data ndị ọzọ na-ekpuchi data, ihe nchịkọta HTML agaghị ewe oge. Kama nke ahụ, ọ ga-ewepụta ozi sitere na ibe weebụ dị omimi ma dị elu na naanị ihe nke sekọnd. N'ụzọ dị iche, ọrụ ndị ọzọ na-ekpochapu nwere ike ịmalite site na ụbọchị asaa ma ruo iri ma wepụ oge na ike gị.
2. Ngwa ngwa na nchekwa
Ihe ka ọtụtụ ngwa ngwa ntanetị weebụ na-eji nwayọọ nwayọọ karịa oku API, ụfọdụ anaghị enyekwa nchebe na ịntanetị. N'adịghị ka ndị ọrụ nchịkọta data ahụ, onye nchịkọta HTML na-arụ ọrụ ya dị elu ma nwee ike ịhazi ihe ruru iri puku ibe weebụ n'ime 20 - 30 nkeji. E wezụga nke a, ngwá ọrụ a na-eme ka nchekwa gị na nzuzo gị. Ọ pụtara na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara nchekwa nke data gị na-ekpochapụ ka ọ ghara ịkekọrịta ya na ndị ọrụ nke atọ.
3. Ezigbo nlezi na nzi ezi
Nchịkọta ihe ntanetị bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ngwaọrụ nchapu data nke ga-eme ka nnukwu nhazi na nzi ezi. Ọ pụtara na data amịpụtara abụrụghị njehie ma ọ nweghị okwu ndị na-eduhie eduhie. Obi dị m ụtọ na teknụzụ ntanetị a anaghị achọ ọrụ ọ bụla ma hụ na ọ ga - arụpụta ezigbo nsonaazụ.
4. Na-enyere gị aka ịnọgide na-asọmpi
Na ụwa a na-achụpụ data, anyị ga-akpachara anya ka ozi dị na net ahụ na-agbanwe agbanwe ọbụla ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta data ziri ezi, anyị ga-eji ihe ntanetị HTML. N'ezie, ngwá ọrụ a nwere ike inyere mmalite aka otu nzọụkwụ n'ihu ndị na-asọmpi ha. Site na ihe ntanetị HTML, ị nwere ike ịnakọta, hazie, wepụ na mbupụ ozi dị elu na ihe nkeji. Ọzọkwa, ọrụ nchịkọta data a na-enyere anyị aka ilekwasị anya na ụdị ahịa ndị a ugbu a na-enyekwa ozi gbasara ibe weebụ anyị. Ọ nwere ike wepụ data ndị bara uru na nke a pụrụ ịgbanwe agbanwe, na-enweghị mmebi na àgwà. N'ihi ya, ihe ntanetị HTML bụ nhọrọ nke òtù na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụwa niile.
5. Na-emekọ na URL wara
Mgbe ụfọdụ, anyị na-ahụ URL ndị gbawara agbawa ma ka na-achọ iwepụta ozi ha. Site na ihe ntanetị HTML, ọ dịịrị onye ọ bụla mfe wepu data sitere na netwọk weebụ ndị gbajiri agbawa, ụlọ akwụkwọ ntanetịime, na mkpịsị XHMTL. Ọ nwere nkwalite dịgasị iche dị ka Loofah na Sanitize na-enyere aka na-ehichapu njikọ ndị ahụ agbajiri n'otu ntabi anya. Nke a nwere ike wepu data site na HTML na XML faịlụ ma nye data ziri ezi n'oge dị mkpirikpi Source .